आज दिनभरका २० समाचार
संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा तेस्रो पटकसम्मको सुनुवाइमा पनि मूल विषयमा प्रवेश पाएन । संसद विघटन संवैधानिक हो वा असंवैधानिक हो भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि इजलासको स्वरूपमै बहस अल्झिएको हो ।
संवैधानिक वा बृहत् पूर्ण इजलास भन्नेमै अल्झियो संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा
संवैधानिक इजलासबाट संसद विघटनको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पुर्‍याउने तयारीमा थिए रिट निवेदक अधिवक्ताहरू । २२ पुसको बहसमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई स्वार्थ बाझिने कारण देखाएर बेञ्चबाट बाहिर पुर्‍याउन सफल भएका अधिवक्ताहरू बुधबार जसरी पनि बृहत् पूर्ण इजलासमा मुद्दा सार्ने तयारीसाथ बहसमा उत्रिएका थिए ।
इजलासको हैसियतमै प्रश्न, प्रधानन्यायाधीश मौन
नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको समूहका उच्च तहका नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोला पक्राउ परेका छन् । उनलाई प्रहरीले ललितपुर र मकवानपुरको सीमा क्षेत्रबाट बुधबार पक्राउ गरेको प्रहरी उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
विप्लव समूहका पश्चिम कमाण्डर धर्मेन्द्र बाँस्तोला पक्राउ
नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूहका उच्च तहका नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोला पक्राउ परेका छन् । उनलाई प्रहरीले ललितपुर र मकवानपुरको सीमाबाट बुधबार पक्राउ गरेको हो । उनी विप्लव समूहका पश्चिम कमाण्डर हुन् ।
फुत्किए प्रकाण्ड, फन्दामा धर्मेन्द्र
मलुकमा तरल राजनीतिक अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण हुन लागेको भन्दै नागरिक अगुवाले सरकारलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन् । कामचलाउन सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली १ माघमा भारत भ्रमणमा जाँदै छन् ।
नागरिक अगुवाकाे खबरदारी : कामचलाउ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारत गएर कुनै सम्झौता नगरून्
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ जारी छ ।सुनुवाइमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गरेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाकाे सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजानुनपर्ने तर्क गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता खरेललाई प्रधानन्यायाधीश राणाकाे प्रश्न : मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलास लैजान किन मिल्दैन ?
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक इजलासले संविधानका सम्पूर्ण धाराका व्याख्या गर्न सक्ने बताएका छन् । संवैधानिक इजलासमा बृहत् पूर्ण इजलासको माग गर्ने कानुन व्यवसायीलाई उनले संविधानका सबै व्याख्या संवैधानिक इजलासले नै गर्ने जवाफ दिएका हुन् ।
संसद् विघटनपछि ओलीको समर्थनमा हुने जुलुस र र्‍यालीमा पनि ‘ओली बा तिम्रो साथमा साइबर सेना छ’ जस्ता नारा लाग्ने गर्छन् । नारा र भाषण हुँदै साइबर सेना अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि सक्रिय देखिएको छ ।
फेसबुक र ट्विटरमा 'ओलीका साइबर सेना', आलोचकमाथि गालीगलौज
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटका पक्षमा सर्वोच्चमा बहस गरेका कानुन व्यवसायीले त्यस रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमाभन्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग गरेका छन् । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट हेर्नु अमिल्दो रहेको उनीहरूको तर्क छ ।
संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमाथि कानुन व्यवसायीको प्रश्न, 'लेख्दै नलेखेको कुरा अदालतले कसरी देख्यो ?'
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय टिभी च्यानल जी न्युजका सुधीर चाैधरीबीचको अन्तर्वार्तालाई ‘नाटक’ भनेका छन् ।
जी न्युजको अन्तर्वार्ता नाटक हो : प्रचण्ड
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हेरफेर गरेका छन् । संवैधानिक इजलासको पुरानो टिममा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सट्टा सपना प्रधान मल्ललाई राखेर राणाले बुधबारका लागि संवैधानिक इजलास तोकेका हुन् ।
संवैधानिक इजलास : हरिकृष्णको ठाउँमा सपना
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको ठाउँमा सपना प्रधान मल्ललाई ल्याएर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा छिन्ने संवैधानिक इजलास तोके । न्यायाधीश कार्की यसअघि २०७२ मा केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा महान्यायाधिवक्ता भएकाले उनी इजलासमा बस्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै विरोध भएको थियो ।
संसद् विघटन मुद्दामा न्यायाधीश सपनामाथि पनि नैतिक प्रश्न
प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दिल्लीराज विष्ट नियमित काममा फर्किएका छन् । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या प्रकरणमा बर्खास्तपछि पुनःबाहली भएका विष्ट बुधबारदेखि काममा फर्किएका हुन् ।
काममा फर्किए एसपी दिल्लीराज विष्ट
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्षले असहमति जनाएकाे छ । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने प्रस्ताव मान्य नहुने बताएका हुन् ।
संसद विघटनविरुद्धका रिट बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सरकारी पक्ष असहमत
१ माघदेखि अनलाइन प्रणालीमार्फत नयाँ श्रम स्वीकृति लिन सकिने भएको छ । अनलाइनबाट नयाँ श्रम स्वीकृति दिनका लागि सम्पूर्ण तयारी सकिएको जानकारी वैदेशिक रोजगार विभागले दिएको छ ।
भाेलिदेखि अनलाइनबाटै नयाँ श्रम स्वीकृति, विभाग भन्छ : अब ठगी नियन्त्रण हुन्छ
मुलुककाे चालू खाता पुनः घाटामा गएको छ । आयात व्यापार बढ्न थालेपछि चालू खाता पुनः घाटामा गएकाे हाे । गत साउनदेखि लगातार चार महिना बचतमा रहेको चालू खाता मंसिर महिनाको अन्त्यसम्ममा २१ अर्ब ३२ करोड रूपैयाँले घाटामा पुगेको राष्ट्र बैंकको वित्तीय विवरणले देखाएको छ ।
चार महिना बचतमा रहेको चालू खाता पुनः घाटामा
नेपाल प्रहरीका ११ जना प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)लाई प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) मा बढुवा सिफारिस गरिएको छ । बुधबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले ११ जना एसपीलाई एसएसपीका लागि बढुवा सिफारिस गरेको हो ।
प्रहरीका ११ एसपी एसएसपीमा बढुवा सिफारिस
नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टाको अवधिमा ४४५ जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ४ हजार १५४ जनाको पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण गर्दा १४८ महिला र २६१ पुरुषमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
देशभर ४४३४ सक्रिय संक्रमित, आधाभन्दा धेरै काठमाडौं उपत्यकामा
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा माघको पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । माघको पहिलो साताभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्नेगरी काम भइरहेको बोर्डले जनाएको हो ।
कक्षा १२ को नतिजा माघ पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने बोर्डको तयारी
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २९, २०७७, २१:४५:००
पूर्वजनमुक्ति सेनाका कमाण्डरलाई ओलीले भने : नेतृत्वले तपाईंका भावनालाई दुरुपयोग गर्‍यो2min read
प्रचण्ड-नेपाल समूहले बोलायो स्थायी कमिटीको बैठक 1 min read
फागुनसम्ममा ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाइँदै2min read
वडा कमिटीसम्म ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्छ : गोकुल बाँस्कोटा2min read